Farqiga u dhaxeeya qoraallada Kheyre iyo Farmaajo ee doorashada
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si cad maanta uga horyimid in dowladda hadda jirta muddo kordhin loo sameeyo, isaga oo sheegay inay muhiim tahay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo.
"Waa in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu tala galay, lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku saleysan mudo kordhin sababtoo ah mudo kordhintu waxay horseedi kartaa qalalaase siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuur", ayuu yiri Kheyre.
Dhanka kale, qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu taageeray go’aanka golaha wasiirradu ay ku gaareen in doorashadu ay xilligiigeedi ku dhacdo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay “inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgaliyo doorasho waafaqsan Dastuurka iyo Sharciga Doorashooyinka, kuna dhacda jawi midnimo, wadatashi iyo isqancin.”
Inkasta oo labada qoraal ay ka wada siman yihiin in doorasho la qabto, haddana waxaa muuqata in macno ahaan iyo ujeedo ahaan kala duwan yihiin. Waxaa warbixintan ku eegaya Jacfar Kukay.